Ndị ọrụ DMZ, gịnị ka ọ bụ? Olee ọrụ? Kedu uru ọ nwere? Chọpụta! | Akụkọ akụrụngwa
Enwere ọtụtụ ndị ọrụ, n'agbanyeghị na ha nwere ọtụtụ ihe ọmụma na Mgbakọ na netwọkụ na ọbụlagodi inwe ike hazi rawụta na otu puku na ụzọ dị iche iche, eziokwu bụ na ha amaghị ihe DMZ, ihe acronym na anyi nile guru mgbe anyi abanye web menu nke router anyi, obu odi mfe o nwere ike ibu, mana na obu nani mmadu ole na ole mara ihe nke a bu.
1 Kedu ihe bụ DMZ?
2 Otu esi eji DMZ eme ihe na gburugburu ebe obibi
3 Kedu mgbe bụ oge dị mma iji DMZ?
4 Otu esi emeghe ọdụ ụgbọ mmiri niile site na ịgbalite DMZ na PC
5 Otu esi eme ka ndi oru DMZ rụọ ọrụ na PS4 na XBOX iji nwee njikọ ka mma
Kedu ihe bụ DMZ?
Nke mbụ, ọ kachasị mma na anyị maara ihe nhọrọ a bụ na ihe ọ na-enye ohere, ọkachasị ịkọwa ihe ụfọdụ na ihe na-eme mgbe anyị kpebiri iji ya. Banyere ihe DMZ pụtara, nsụgharị Spanish nke okwu ahụ, dị ka aha ya na-ekwu, ga-abụ ihe dị ka Mpaghara mebiri emebi (DMZ sitere na okwu DesMilitarized Mpaghara).
Dị ka nkọwa zuru ezu, gwa gị na ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ka nhọrọ anyị kwesịrị ịgafe, ikekwe n'ihi aha ya, eziokwu bụ na anyị na-eche ihu otu njirimara nke rawụta anyị nke bara uru ma na-atọ ụtọ, ọ bụrụhaala na ị maara otú e si hazi ihe niile n'ụzọ ziri ezi, karịa ka ị nwere ike iche n'echiche.
Ya mere, anyị na-ekwu maka otu nhọrọ ejiri rụọ ụlọ na ọtụtụ ụlọ ọrụ. Ihe atụ nke iji DMZ na ọkwa ụlọ ọrụ ga-abụ maka njikọ na ntanetị dị na ntanetị na-ekewaYabụ, naanị kọmputa ndị dị na DMZ nwere ike jikọọ na ntanetị dị na mpụga mana ya na ntanetị nke ụlọ ọrụ ahụ. A na-ahazi nke a n'ụzọ dị otú a ka onye ọ bụla nwere ike imebi nchebe nke kọmputa ndị a enweghị ike ịnweta netwọk nke ụlọ ọrụ dị n'ime ebe ọ bụ na ha ga-ahụ onwe ha na njedebe nwụrụ anwụ. Anyị ga-ahụ ihe ọ ga-enye anyị na gburugburu ebe obibi.
Otu esi eji DMZ eme ihe na gburugburu ebe obibi
N'ime ụlọ obibi, ya bụ, n'ime ụlọ anyị, jiri nhọrọ ahụ DMZ bụ ihe dị ka imeghe ọdụ ụgbọ mmiri niile, ma e wezụga ndị achọtara n'iwu na tebụl NAT, na adreesị IP nke kọmpụta dị na netwọkụ dị na mpaghara n'onwe ya.
Nke a nwere ike ịbụ ihe na-atọ ụtọ karịchaa ma ọ bụrụ na ị banye na nsogbu mgbe ị na-eme ụfọdụ mmemme ma ọ bụ mgbe ị na-enweta ọrụ ụfọdụ ị nwere ike itinye na igwe na netwọkụ gị site na mpụga.
Dịka ị pụrụ ịhụ, anyị na-ekwu maka imeghe ọdụ ụgbọ mmiri niile nke rawụta na igwe dị na netwọkụ anyị, nke a nwere ọghọm ya ebe ọ bụ na ihe anyị na-eme bụ ikwe ka onye ọ bụla na ịntanetị iji nwee ike soro ma wakpo ma ọ bụ nweta kọmputa anyị, ihe njikwa egwuregwu ma ọ bụ ngwaọrụ site na ọdụ ụgbọ mmiri ọ bụla belụsọ na anyị nwere, dịka ọmụmaatụ, firewall ma ọ bụ nhazi nke na-ahapụ ha nke ọma na nchekwa na ngwaọrụ n'onwe ya.
Ọ bụrụ na ị kpebisiri ike iji nhọrọ DMZ, gwa onwe gị na nke mbụ ị kwesịrị gbaa mbọ hụ na nhazi ahụ dabara adaba. N'etiti nkọwa nke nke a ị ghaghị iburu n'uche, na mgbakwunye na ịhazi akụrụngwa nke ọma, ma akaụntụ onye ọrụ ma ọ bụ firewall ya, na-ekenye a IP idozi na kọmpụta nke ị ga-etinye mpaghara ahụ mebiri emebi, n'ụzọ dị otú a ọ gaghị efunahụ IP ahụ, ihe nwere ike ime ma ọ bụrụ na ịmalitegharị rawụta ahụ n'onwe ya ọtụtụ oge ebe ọ nwere ike ịnye IP a na ngwaọrụ ọzọ nke na-enweghị nchebe.
Kedu mgbe bụ oge dị mma iji DMZ?
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị ka ihe anyị kwesịrị izere n’efu ọ bụla, nke bụ eziokwu bụ na, dịka m kwuru, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ, ọkachasị mgbe anyị chọrọ mee ka ohere dị na ntanetị dị n'èzí maka mmemme P2P, ọrụ weebụ na ọbụna egwuregwu vidio. N'okwu m kpọmkwem, dịka ọmụmaatụ, taa enwere m DMZ na-arụ ọrụ na-etinye na sava weebụ. A haziri ihe nkesa a nke ọma na firewall ga-echebe ọdụ ụgbọ mmiri niile na akụrụngwa n'onwe ya nwere naanị ọrụ ndị dị mkpa maka ọrụ ya na-arụ ọrụ ka ndị ọzọ wee ghara ịnweta.
Otu esi emeghe ọdụ ụgbọ mmiri niile site na ịgbalite DMZ na PC
Ozugbo anyị doro anya banyere ihe DMZ bụ na ihe ọ bụ maka anyị ga-eme ka nhọrọ a rụọ ọrụ, maka nke ahụ, nke mbụ, anyị ga-amata ọnụ ụzọ okporo ụzọ routerN'ozuzu, ọ gwụla ma agbanweela ya, jikọọ na rawụta anyị, site na eriri, WiFi na ọbụlagodi, anyị ga-emepe ihe nchọgharị ma dee http://192.168.1.1/, nke a ga-akpọrọ anyị gaa na peeji nke ga-eme jụọ anyị maka aha njirimara paswọọdụ nke onye njikwa rawụta, nke ọ bụla ma dabere na ụlọ ọrụ nke anyị nyere anyị nweta ga-abụ otu ma ọ bụ nke ọzọ.
Ozugbo anyị nwere data a niile na ịnweta ntanetị nhazi nke onye ntanetị anyị ga-alaghachi na kọmpụta ahụ wee bido ọnụ, site na Linux nke a bụ ọrụ dị mfe ọ bụ ezie na, site na Windows, ọ bụghị ụdị nhọrọ a na-ahụ anya ebe ọ bụ na anyị nwere aga na-amalite, na-agba ọsọ na na na windo a CMD imeghe sistemụ Command Command (n'ihe banyere Windows 10 naanị pịnye CMD na igbe dialog Cortana). Ozugbo anyị meghere nhọrọ a, anyị ga-ede ipconfig ịmata IP nke igwe anyị sitere na ya, n'ihe banyere sistemụ arụmọrụ ọzọ na-abụghị Windows anyị ga-eji ifconfig.
Ozugbo anyị matara IP nke ngwaọrụ anyị, ihe niile anyị ga - eme bụ ịlaghachi na ntanetị ntanetị nke rawụta anyị na chọta nhọrọ DMZN'ọtụtụ ndị na-agagharị agagharị, a na-ahụ nhọrọ a na submenu n'ime Gaming, NAT ma ọ bụ nhọrọ yiri ya ka anyị wee tinye DMZ nnabata na-arụsi ọrụ ike ma gosi IP enwetara na usoro gara aga. N'oge a anyị ga-enwerịrị chekwaa mgbanwe.
Otu esi eme ka ndi oru DMZ rụọ ọrụ na PS4 na XBOX iji nwee njikọ ka mma
Dị ka ọ dị na PC ọ dị ezigbo mkpa ikenye IP edozi na PS4 anyị na maka nke a anyị ga-aga nhọrọ Ntọala -> Network -> Hazie njikọ --ntanetị -> anyị na-ahọrọ ụzọ anyị si ejikọta (WiFi ma ọ bụ eriri) -> Ahaziri -> Akwụkwọ ntuziaka. Na windo a, ọ bụ ebe anyị ga-ahazi, dịka na PC, mpaghara niile ebe ọ bụ na ha dị mkpa maka ọrụ netwọkụ.
Ozugbo ubi niile juputara, pịa Na-esote. Na windo a ọ dị mkpa hapụ MTU na Akpaaka. N'akụkụ a, ọtụtụ ndị ọrụ achọpụtawo na enwere nsogbu mgbe ịbanye na PSN, otu n'ime ihe ngwọta bụ ịgbanwe MTU na ntuziaka ma tinye 1473 bara uru.
Ozugbo anyị mechara MTU, ọ bụ oge nnọchiteanya, n'oge a ọtụtụ ndị ọrụ agaghị eji ihe ọ bụla, yabụ ihe kachasị mma bụ ịhọrọ nhọrọ 'Ejila', bụrụ na ị nwere zighachi akwụkwọ nnọchiteanya nke ị kwadoro, ị ga-ahọrọ nhọrọ ahụ'Jiri'ma gaa n'ihu nhazi ya.
N'oge a anyị ga-enwe naanị, dịka ọ dị na ngalaba gara aga, hazie ndị ọbịa DMZ na-egosi adreesị IP nke njikwa anyị. Dị ka nkọwa, gwa gị na usoro iji hazie ihe ọ bụla ọzọ iji jiri DMZ, dị ka Microsoft Xbox, kpọmkwem otu ihe ahụ.
Obi abụọ adịghị ya, nke a nwere ike ịbụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji dozie nsogbu anyị niile, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị bụ onye egwuregwu na ịnwe nsogbu dị iche iche nke Nat (Nsụgharị Adreesị Networkntanetị), otu n'ime nsogbu ndị na-agakarị mgbe anyị na-egwu egwuregwu n'ịntanetị na nke ahụ nwere ọtụtụ ihe ọ ga-eme na eziokwu ahụ bụ na adreesị IP niile nke usoro IPv4 agwụla, otu n'ime ihe ndị mere o ji dị mkpa iji mejuputa IPv6 ohuru na nke ahụ, ugbu a, ọ ka ga-ewe oge iji mejuputa ya.
Tupu m sịchaa, aga m achọ ịza ajụjụ n'ụzọ dị mfe na ọkwa a, agbanyeghị na isiokwu a doro anya na ọ na-enye ndị ọzọ sara mbara karị, na nsogbu NAT sitere na nkewa na intaneti emeela ka o buru ndi ozo ha chọrọ ụdị onye ntụgharị ka ngwaọrụ ndị ahụ nwee ike jikọta ha. Anyị nwere nsogbu mgbe, dịka ọmụmaatụ, anyị chọrọ ijikọ na NAT nke ụdị 1, NAT1 ma ọ bụ NAT meghere otu nke ụdị 2, NAT 2 ma ọ bụ NAT dị oke ala ebe onye ntụgharị ahụ abụghị otu na nke a na - eme ka ọ ghara ikwe anyị omume. jikọọ na-egosi atụ ụjọ ọdịda.
Dịka nkọwa ikpeazụ, kwuo okwu taa na enwere atọ NAT:
NAT ụdị 1 (oghe): Na ọnọdụ a enweghi nsogbu mgbe ị na-eme njikọ dị n'etiti njikwa anyị ma ọ bụ ngwaọrụ na sava egwuregwu, ọ bụ ezigbo nhọrọ ka ihe niile wee rụọ ọrụ nke ọma. Maka ụdị NAT a, a ga-ejikọ usoro ahụ na ịntanetị, dịka ọmụmaatụ n'iji eriri.
NAT ụdị 2 (agafeghị oke): Ọ bụ nhọrọ kachasịsịsị na ịntanetị jikọọ ebe ọ bụ na e nwere onye na-eme ihe ntanetị n'ime ya, ọbụlagodi ebe nsogbu malitere ịmalite, dị ka egwuregwu na-aga ngwa ngwa, ị nweghị ike ịgwa ụfọdụ ndị ọrụ ma ọ bụ na ị nweghị ike ịnabata egwuregwu. Na usoro ihe a, ngwaọrụ ahụ na-ejikọkarị na ịntanetị site na rawụta na ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ na DMZ.
NAT ụdị 3 (nlezianya): N'ime ụdị NAT a, anyị nwere ike ịnwe ọwa nkwukọrịta nwere ezigbo ndị ọrụ nwere ụdị 1 ma ọ bụ mepee NAT, nke nwere ike ịnye ahụmịhe na-adịghị mma ebe ọ bụ na imirikiti ndị ọrụ na-eji ụdị 2 NAT eme ihe. na ntaneti site na router ma ọdụ ụgbọ mmiri emechi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » DMZ, ozi niile ịchọrọ iji mepụta nke gị demilitarized mpaghara
Nke a bụ ihe Honor Band 3 dị ka ya, mgbaaka ọrụ ga-eju gị anya
Ihe ọhụrụ Samsung SmartCam nwere ike nyochaa ụlọ anyị na 1080p ka edozichara